10 Kasị Mma Isi iyi Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Kasị Mma Isi iyi Na Europe
E nwere ọtụtụ ebube na ndị mara mma akara na Europe. N'azụ nkuku ọ bụla, enwere ihe ncheta ma ọ bụ ogige ileta. Otu n'ime nlegharị anya na-atọ ụtọ ma dị ịrịba ama bụ isi iyi dị ebube, ma anyi ewerewo aka anyi 10 nke kasị mma isi iyi na Europe.
Egwu, imebiga ihe ókè, Isi iyi Europe dị egwu. Site na Paris ruo Budapest, n'ime obodo ma ọ bụ n'àgwàetiti, ndị a 10 ịtụnanya iyi bụ kpam kpam uru a nleta.
1. Trevi Isi mmiri Na Rome
Nnukwu mmiri na isi iyi kachasị ama na Rome bụ isi iyi Trevi. Isi iyi a magburu onwe ya 2,824,800 cubic ụkwụ mmiri kwa ụbọchị. Ọzọkwa, N'oge ndị Rom, ọ bụ isi iyi mmiri. N'ihi ya, ị ga-ahụ na isi iyi Trevi na okporo ụzọ okporo ụzọ atọ "Tre Vie" isi iyi ụzọ atọ.
Ọ bụrụ na ị maghị, Isi iyi Trevi bụ otu n'ime ihe ịtụnanya asaa nke Europe. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na isi iyi kachasị mma na Europe nwere ọtụtụ fim, dị ka Ememe Ndị Rom.
Ebee ka Trevi Isi iyi Na Rome?
Mmiri Trevi ahụ na-adọrọ mmasị bụ naanị njem 10 nkeji site na Nzọụkwụ Spanish. I nwekwara ike iji tram gaa ebe Barberini.
Milan ka Rome Zụọ Ahịa
Pisa ka Rome Zụọ Ahịa
2. Isi iyi Trocadero
Akụkụ kasị dị ịrịba ama nke isi iyi Trocadero bụ isi iyi nke Warsaw dị n'etiti. Ọ na-adị efere, na 12 isi iyi gbara ya gburugburu. Ya mere, idaha Eiffel Tower na isi iyi dị ezigbo egwu.
The ubi mara mma na isi mmiri bụ na mbụ akụkụ nke Trocadero Palais, e kere ha n'ime 1878 na ngosipụta zuru ụwa ọnụ. Igha ihu osimiri Seine, n'azụ Palais du Chaillot na n'ihu thelọ Elu Eiffel, Isi iyi Trocadero bụ zuru okè picnic ntụpọ na Paris, na Europe.
Otu esi enweta Trocadero?
Nwere ike ịbanye n'ubi nke Trocadero na isi iyi site metro, gaa ọdụ Trocadero.
3. Isi iyi Latona Na Versailles
Enwere 55 isi iyi na ubi nke Versailles, ma nke kachasị mma ma dị ịrịba ama bụ isi iyi Latona. Isi mmiri La Latona sitere n'ike mmụọ nsọ nke Ovid's Metamorphoses, Latona nne Appollo na Diana, E gosipụtara ụmụ ya na isi iyi a dị ebube.
Iguzogide Ọwa Mmiri, ị nwere ike ịchọta ma nwee mmasị na ọhụụ nke King Louis XIV site na ebe ọ bụla na Versailles. N'oge elu oge ị nwere ike ịnụ ụtọ isi iyi egwu egwu na-ewere ọnọdụ 3 ugboro n'izu.
Otu esi aga Latona?
Palacelọ Versailles dị na obodo Versailles, dị nnọọ 45 nkeji ụgbọ okporo ígwè si Paris. I nwere ike na-ụgbọ okporo ígwè na Versailles Chateau Rive Gauche ojii. Mgbe ahụ, ọ bụ nanị obere ije site na ọdụ ruo n'obí na ubi.
La Rochelle na Nantes Zụọ Ahịa
Toulouse gaa La Rochelle Pzụ Ahịa
Bordeaux na La Rochelle Pzụ Ahịa
Paris na La Rochelle Pzụ Ahịa
4. Mmiri Efteling
Ihe egwu egwu egwu kachasị egwu na Europe bụ egwu egwu egwu na-egosi na ogige Efteling. The ga-eju gị anya 12 nkeji ìhè na mmiri na-egosi, ebe frogs na-eme ka mmiri ghọọ ihe ngosi balet mara mma.
E wuru usoro mmiri Aqunura maka Efteling 60 ncheta. ikwubi, ihe nkiri egwu bụ oke njedebe na njem ezinụlọ gaa na ihe ịtụnanya Ogige ntụrụndụ okirikiri.
Etu ị ga-esi banye na mmiri iyi?
Ogige a dị ịtụnanya dị naanị otu awa site na Amsterdam, ya mere, ọ zuru oke maka ezinụlọ na-atọ ụtọ ụbọchị-njem si Amsterdam.
5. 1o Kasị Mma Isi Iyi Na Europe: Isi iyi Trafalgar
Mermaids na Tritons bụ ihe ndị bụ isi na isi iyi Trafalgar Square. Otú ọ dị, N'adịghị ka isi iyi ndị ọzọ, odighi akuko odide n’azu ichoputara ihe ndia. Isi mmiri kachasị mma na London ka e wuru na mbụ 1841 iji belata ohere maka ndị ngagharị.
Ga-ahụ isi iyi Trafalgar Square dị n’ihu National Gallery na London. Na mgbakwunye, ị kwesịrị ịma na ọ bụ ebe ndị Lọndọn na-abịa maka ekpombo ekeresimesi. Ya mere, ị ga-enwe nnukwu ihe ọzọ mere ị ga-eji gaa n’otu isi iyi mara mma na Europe.
Uzo esi aga na isi iyi Trafalgar na London?
Nwere ike ịga njem ọdụ ụgbọ mmiri Charing Cross n'akụkụ ọ bụla na London.
Amsterdam Iji London Train Prices
6. Isi iyi Swarovski Na Innsbruck
Mpaghara Tyrol bụ otu n’ime mpaghara mara mma na Austria, yana ụlọ isi ụlọ ọrụ Swarovski. Isi iyi Swarovski dị na Swarovski Crystal Worlds, a mgbagwoju nke ntụrụndụ na nri. Ezubere ya n'ezie maka ndị na-emepụta iko kristal, Swarovski.
Isi mmiri ahụ yiri isi mmadụ. Ọ bụ otu n'ime isi iyi kachasị egwu na Europe, ma kwesiri ileta gị mgbe ị na-eme njem na Austria.
Otu esi enweta ya Isi iyi Swarovski na Innsbruck?
Ị nwere ike njem ụgbọ okporo ígwè site na Innsbruck ruo Swarovski n’ihe na-erughị otu awa.
Munich na Innsbruck Zụọ Ahịa
Salzburg na Innsbruck Zụọ Ahịa
Oberstdorf gaa Innsbruck Zụọ Ahịa
Graz ka Innsbruck Zụọ Ahịa
7. Jet Deau Na Geneva
Mmiri jet, ụgbọ mmiri mmiri na Bekee, bụ ọdụm kachasị elu na Europe ma nwee ike iru 400 mita. Ná mmalite, Ewubere isi iyi ahụ iji chịkwaa nrụgide nke osisi hydraulic na La Coulouvreniere, ma n’oge na-adịghị anya ọ ghọrọ akara ngosi nke ike.
Ya mere, o siri ike ịhapụ Jet Deau mgbe ị gara Geneva. N'ezie, ị nwere ike ịchọta ụzọ gị na Lake Geneva, ma ọ bụrụ na ị nanị soro mmiri ugboelu.
Lyon na Geneva Zụọ Ahịa
Bern na Geneva Zụọ Ahịa
8. Isi iyi nke Stravinsky, Paris
Isi iyi Stravinsky dị na Center Pompidou bụ ụtụ egwu dị egwu nye onye na-agụ Russia, Igor Stravinsky. Egbugbere ọnụ na-egbuke egbuke, ochi, na ihe arụ ndị ọzọ na-asọ oyi na-eme ka isi iyi a bụrụ otu n'ime isi iyi ndị a na-adịghị ahụkarị na Europe. Ihe osise a bụ Jean Tinguely na onye na-ese ihe bụ Niki de Saint Phalle. Ndị omenkà abụọ a nwere ụdị dị iche iche: ụlọ ọrụ Dadaist n'otu aka, ma na-enwu gbaa na aka nke ọzọ. Ya mere, ọnụ, ọrụ ha na-agba ọmarịcha egwu oge gboo nke oge a na narị afọ nke 20.
Obi abụọ adịghị ya, Isi iyi nke Stravinsky ga - adọrọ uche gị mgbe ị masịrị ya. Ọ dị ka ịgbara ịgba ama egwuregwu circus n'ọnụ ụzọ ama ama Pompidou ama ama n'ụwa niile.
Kedu ka m ga-esi nweta The Isi iyi nke Stravinsky?
Fontaine Stravinsky dị n'ọnụ ụzọ ogige Pompidou. Nwere ike were Metro ka Hotel de Ville ojii.
Paris na Marseilles Zụọ Ahịa
Marseilles na Paris Zụọ Ahịa
Marseilles na Clermont Ferrand Pzụ Ahịa
9. Osimiri Musical nke Margaret Island Na Budapest
Isi mmiri kacha ukwuu na Hungary na-egosipụta egwu dị egwu na ihe ngosi laser n'oge ọ bụla. Mee ruo Ọktọba, bụ oge kacha mma iji gaa Margaret Island na Budapest. Nwere ike ịnụ ụtọ picnic mgbe ị na-ekiri mmiri na ọkụ.
Akụkụ ọzọ na-eme ka isi iyi Krizikova bụrụ otu n'ime 10 ndị kasị mma isi iyi na Europe, bụ na enwere atụmatụ ngosi egwu maka ụmụaka na ndị okenye.
Kedu ka m ga-esi nweta The Isi mmiri Margaret Island?
Nwere ike nweta Margaret Island isi iyi si Budapest obodo center site tram.
10. Isi mmiri Krizik Na Prague
Isi mmiri ịgba egwu, Isi iyi Krizik, dị n'akụkụ ogige ngosi Prague. Na-amalite site 8 etiti abalị ruo etiti abalị, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọkụ kacha mma na egwu kacha mma. Enwere 4 na-egosi mgbe nke ọ bụla dị iche na nke ọzọ na egwu na ọkụ.
Emechara isi iyi egwu Krizik na 1891 maka ebe ngosi. Kemgbe ahụ, ọ na-eme ndị mmadụ obi ụtọ. Anyasị na ihe ngosi ga-abụ nnukwu njedebe na ụbọchị magburu onwe ya na Prague.
Kedu ka m ga-esi ruo na Krizik?
Nwere ike mfe iji Krizik isi iyi site tram ka ọdụ Vystaviste.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta ndị dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè tiketi na ihe ọ bụla nke mara mma isi iyi na Europe.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Mma Isi iyi Na Europe”N'elu saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-fountains-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie tr ka pl ma obu nl na otutu asusu ndi ichoro.
Ugwu ndi mara mma Njem Europe Isi iyi Isi IyiInEurope MusicalFountain Train Travel